Tarisa kuti ndeipi Apple Watch modhi inokwana iwe | Ndinobva mac
Tarisa uone kuti ndeipi Apple Watch modhi ndiyo inokodzera chiuno chako
Pane zvishoma zvasara kumazana ezviuru evashandisi veiyo mhando yeakarumwa apuro kutenderera pasirese kuti vatange kutenga yavo Apple Watch kubva pakutanga kwaKubvumbi. Hazvizivikanwe zuva chairo raachazotengesa Asi chatinoziva ndechekuti iyi Apple inobata Keynote.
Nekudaro, vashandisi vazhinji, pakati pavo vandinoverenga ini, havana chokwadi, nekuda kwehukuru hwechiwoko chatinacho, chemuenzaniso watichanyanya kufarira. Ndokusaka chinyorwa icho chatichapa kwauri nhasi chichizokubatsira iwe kuva nepfungwa iri nani. kana iri saizi yekusarudza.
Iyo Apple Watch iri kugadzirwa nemhando mbiri, 38mm uye 42mm. Hatisi kutaura nezve musiyano wakakura muhukuru, asi sezvazvakaitika neiyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus, saizi ine basa Uye, sezvazvakaitika kwandiri, ndakafunga kutengesa yangu iPhone 6 Plus kuti gare gare ndiwane iyo 4,7-inch modhi iyo yandiri kufara nayo.
Iye zvino nhoroondo inozvidzokorora uye ini handidi kuita chikanganiso chimwe chete uye nditenge isiriyo modhi. Kune izvi ini ndatsvaga mambure zvishoma uye ndawana chinyorwa kubva kuAmerican blog mune iyo pdf faira inopihwa iyo kana yakadhindwa inotipa chaiyo saizi template yeiyo maviri Apple Watch mhando ichave.
Dhawunirodha template, icheke uye uiise pamusoro pechiso chako chekutarisa kuti uwane nhasi nhasi zvauchazoita muna Kubvumbi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tarisa uone kuti ndeipi Apple Watch modhi ndiyo inokodzera chiuno chako
Chinja ruzha rweinopinda mafoni pane yako Mac
Maitiro ekurekodha Slow Motion mavhidhiyo pane yako iPhone 6 uye 6 Plus